पाँच वर्षभित्र,गाउँगाउँमा सडक,घरघरमा विजुली ःमेयर सेजुवाल – KarnaliPost Daily
पाँच वर्षभित्र,गाउँगाउँमा सडक,घरघरमा विजुली ःमेयर सेजुवाल
३० जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०५:०० June 21, 2019 by Karnali Post Daily
२० वर्षपछि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालकै पहिलो मेयरका रुपमा कान्तिका सेजुवाल निर्वाचित भईन । कर्णालीको पहिलो नगरपालिका चन्दननाथको मेयरमा महिलाबाट उनले बाजी मारिन । जुम्लाको सामुदायिक विद्यालयमा झण्डै ४० वर्ष लामो समय शिक्षिका थिईन ।
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट दुईवटा विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । उनले निर्वाचनमा जित हासिल गर्नु अघि र मेयर भईसकेपछि हाल सम्म पनि चन्दननाथ नगरपालिकालाई कनेक्टिभिटी, ईलेक्टिसिटीमा देशकै नमुना बनाउने अठोट गर्दै आएकी छन् । जुम्लाको विकास, कर्णालीवासीका समस्या, जनप्रतिनिधि सँगको अपेक्षा, स्थानीय तहको दुईमा भएका गतिविधिका बारेमा कर्णाली पोष्टकर्मी सागर परियारले गरेको कुराकानीको सार ः
स्थानीय सरकार संचालनको दुईवर्षमा केके गर्नु भयो ?
म जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिएर आएपछि जेठ ७ गते सपथ लिएर जनताको सेवा गर्ने प्रण गरे । दुर्गम कर्णालीको पहिलो नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी, कनेक्टिभिटी र ईलेक्टिसिटी प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छु । भने, नगरपालिका भित्रका १० वटै वडामा सडक पुराएको छ । पहिलो वर्ष अलि नयाँ भएरोला जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिएन । फोहोर व्यवस्थापनका लागि कालेखोली देखि दुनै सम्मको सडक खोलेको छु ।
करोडौको टावर स्थापना गरेको छु । फोहोर व्यवस्थापनको कुरामा ८,९ र १० वडाको लागि पनि फोहोर संकलनको पहल भईरहेको छ । भने दोस्रो वर्षमा पहिलेका कामलाई निरन्तरता दिएका छौ । भने, चौथो नगरसभाबाट १५ वटा एैन समेत पारि गरेका छौ । विकास निर्माणका संरचनालाई अनुगमनमा जोड दिएका छौ । त्यसपछि महिला तथा बालबालिकाको लागि पनि कानुन निर्माण गरेका छौ । अन्यौलतका आधारमा २ वर्ष बित्यो । तर पाँच वर्षमा सबैका घरघरमा विजुली गाउँगाउँमा सडक हुन्छ ।
नतिजामुखी काम त खास्सै देखिएनन नी ?
हामी सबैले यहि कुरा बुझ्न जरुरी छ । तपाईले भने जस्तै नतिजा देखिएको छैन् । भने हामी सुतेर त बसेका छैनौ । काम थुप्रै गरिरहेका छौ । २० वर्षे अल्पकालीन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन गुरुयोजना बनाएका छौ ।
दिगो विकासको अवधारण अनुसार हामी काम गरिरहेका छौ । जादुको छडी होईन झट् देखाउने, पाँच वर्षमा कनेक्टिभिटी र ईलेक्टिसिटीले पुर्णता पाउँछ ढुक्क हुनुहोस । नतिजाकै कुरा गनुर्् हुन्छ भने, रिगरोड जोड्ने सडक छ वटा निर्माण भएका छन् । ( तलिउम, कार्तिकस्वामी, केटीएस लाईन, दानसाँघु, कालेखोली र रानारावत) तपाई हेर्न सक्नु हुन्छ ।
कनेक्टीभिटी र ईलेक्टिसिटीको नारा घन्कीएको छ । नगरबासी अन्धकारमै छन् कुरो के हो ?
तपाईले भनेको सहि हो । नगरबासी अन्धकारमै छन् । तर हामी चुप लागेका छैनौ । राजनीति यात्रालाई निरन्तरता दिनका लागि पनि कनेक्टिभिटी ईलेक्टिसिटिको नारालाई पुर्णता दिन्छौ । तपाईको प्रश्न अनुसार भन्दा चन्दननाथ नगरपालिका असार महिना भित्रै लोडसेडिङमुक्त हुन्छ । यसमा शंका छैन् ।
ठिन्के र जुगाखोला जलविद्युतको लागि १ करोड ६० लाख विनियोजन गरेका छौ । काम अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो । अनि विमानस्थल प्रतिष्ठान, बसपार्क, बीच बजारमा फ्री वाईफाई जडान गरेका छौ । सुरक्षाको हिसाबले संचालनमा आएको छैन् । १० वटै वडामा विद्युतको पोल गाडिसकेका छौ ।
व्यक्तिगत पहलमा नेपाल टेलिभिजनको टावर विस्तार गरेको छु । सडक बत्ति जडान भएका छन् । भलै केहि महिना यता नगरबासी अध्यारोमा छन् । तर दिर्घकालिन विकासमा नगरपालिका जुटिरहेका छौ । फेरी भने, असार भित्रै जुम्ला बजार झिलिमिली हुने प्रतिबद्धता गर्छु ।
पाँच वर्षको अवधिमा घरघरमा विजुली हुने छ । निरन्तर विजुली आएमा संचारका सबै माध्यमको पुहँचमा नागरिक पुग्ने छन् । भने गाउँ गाउँमा सडक पुग्ने छन् । जसबाट घरबाटै गाडी चढेर नगरपालिका कार्यालय सेवाग्राहि आउने छन् । विजुली नियमित भए कार्यलयबाट सेवा पनि समयमै पाउछन् । मेरो कार्यकालमा घरघरमा विजुली गाउँगाउँमा सडक पुराउँछु ।
अपेक्षा अनुसार जनप्रतिनिधिले काम नगरेको आरोप छ त ?
लामो समय पछि संघियता आयो, घरदैलोमा सिंहदबार पनि आयो । सरकार जनप्रतिनिधि संग अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । तर आरोप गुनासा गर्नका लागि गरेर समृद्धी हुदैन् । केहि भएका राम्रो कामको पनि प्रतिक्रिया आवस भन्ने चाहाना हो । हामी प्रमुख र उपप्रमुख महिला भएकोले आम महिला दिदि बहिनीको पहुँच बढेको छ । महिला मैत्री नीति निर्माणमा जोड दिएका छौ ।
पहिलो वर्ष अलमलमै बित्यो, दोस्रोमा केहि काम गर्यौ, अझै गर्देछौ । पाँच वर्ष भित्र जनताका अपेक्षा पुरा गरि छड्ने संकल्प छ । ढिलो विधेयक आउनु, ढिलो कार्यविधि आउनु, ढिलो कार्यान्वयन हुनु, स्पष्ट निर्देशन नआउनु पनि काम गर्न नसक्नुका कारण छ । आरोप गुनासा पनि स्वभविक छन् । तर सकरात्मक सोचको विकास हुन जरुरी छ ।
फोहोर व्यवस्थापन त गर्न सक्नु भएन नी ?
भने जति, सोचे जतिकै काम गर्न निकै ग्राहो छ । तर म ग्राहो छ भनेर पछि हट्ने मान्छे होईन, पाएक पर्ने जगा दिन नमान्ने, भएकोले दुई वर्ष वित्यो, आगामी आव बाट प्रयोगमा आउने निकै ठुलो डम्पीङ साईट निर्माणको तयारीमा छौ । यहाँका युवा, पत्रकार सरोकारवाला संग समन्वय गरी सुन्दर जुम्ला बनाउने सवालमा रतिभर पछि हटिने छैन् ।
नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी लक्ष्य अनुसार छैन् । कसरी विकास हुन्छ ?
हो । हाम्रो आम्दानी निकै न्युन छ । दुई आर्थिक वर्षमा हामीले बहाल र व्यवसायीक कर लगाएनौ । जुन क्षेत्रबाट स्थानीय सरकारको आम्दानी बढ्थ्यो । तर अब हामी आगामी आवबाट बहाल कर र व्यवसायीक करको दायारा फराकिलो बनाउने सोचमा छौ । भने राजश्व चुवावटलाई पनि रोक्ने प्रयासमा छौ । र आम्दानी बढाउनकना लागि कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने अबस्था छ ।
तपाईको स्मार्ट सिटीको योजना कहाँ पुग्यो ?
ठयाक्कै कुरो निकाल्नु भयो धन्यबाद । स्मार्ट सिटिलाई भन्छ भन्नेमा हामी सबै स्पष्ट हुनु पर्छ । स्मार्ट सिटी भन्नेबित्तिकै भारतको ताजमहल जस्तो बंगला र चीनको सिसा जस्तो सडक नसोचौ । भूगोलका आधारमा स्मार्ट सिटि बन्छ ।
जस्तो यता सुन्नुहोस, सेवा प्रदायकले सेवा ग्राहिलाई छिटो छरितो, प्रभाकारी सेवा दिनु स्मार्ट होईन, सफा घर, सफा कार्यालय, सफा विद्यालय, सफा नागरिक, सबैको स्वास्थ्य शिक्षामा पहुँच, विद्युत संचार लगायत अरु मैले यो स्मार्ट सिटी खोजेको हुँ । अर्को कुरा पाँच वर्षमा घरघरमा विजुली र गाउँ गाउँमा सडक पुराएर स्र्माट सिटिको सपना पुरा हुन्छ ।
त्यसो भए स्मार्ट सिटिको काम के भईरहेको छ त ?
भूगोलका आधारमा बन्ने स्मार्ट सिटि जुम्लामा बन्छ । मैले विज्ञ टोलीलाई ५० लाख बजेट स्मार्ट सिटिको ढिपिआर बनाउन दिईसकेको छु । केहि प्राविधक तथा सैदान्तीक समस्या छन् । पाँच वर्ष भित्र स्मार्ट नगर बनाएरै छाड्छु । गर्नलाई कुनै समस्या छ । समस्या छ । हाम्रो सोच र विचारमा समस्या छ भन्नु मत, किन भन्नुहुन्छ ।
स्मार्टसिटिका लागि चार सुचक छन् । टेक्नोलोजी,भौतिक पुर्वाधार सुशासन र स्वास्थ्य शिक्षा हो । जुन कुराको माथि मध्यम स्तरमा आईपुगेका छौ । आज नभए भोली त पक्कै स्मार्ट सिटि बन्छ । डिपिआर फाईनल हुा बित्तिकै काम पनि शुरु हुन्छ । तर अहिलेबाट पनि विभिन्न काम शुरु भईरहेका छन् । विज्ञका अनुसार पनि शहर भन्दा दुर्गममा स्मार्ट सिटि बनाउन सहज छ । उदाहरणका लागि काठमान्डौ कुनै हालतमा स्मार्ट सिटि बन्दैन् । त्यसैले नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटि बनाउन कुनै ग्राहो र्छैन् ।
नप्रतिनिधि आएपछि भ्रष्टचार बढ्यो भन्ने आरोप छ नी ?
प्रमाणमा आधारित कुरामा हामीले बहस गर्ने हो । तपाईले भने अनुसार पनि होला धेरै ठाउँमा सुन्नमा आउँछ । तर चन्दननाथ नगरपालिकामा त्यसो हुदैन् । भ्रष्टकर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई मैले छुटकरा दिदैन् । तपाई हाम्रा हरेक कुरामा निगरानी गर्नुहोस, कतैबाट सुईको भेटाउनु भयो भनेपनि हामी कार्बाहि गछौ ।
त्यसो भए सार्वजानिक सुनुवाई दुईवर्ष सम्म किन भएन ?
सार्वजानिक सुनुवाई हुनु पर्छ । सार्वजानिक सुनुवाई ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ अनुसार गर्नु पर्दछ । तर केहि प्राविधक समस्याले हो हामी गर्छौ । तर यहि आधारमा भ्रष्टचार भईरहेको छ भन्नु तथ्यहिन हो । हामी जनताका सेवकका रुपमा आईसकेपछि सेवा गर्छौ, सरकारले पारिश्रमिक दिएको किन भ्रष्टचार गर्नु । ढक्क हुनुहोस हामी शुसासन पारर्दशिताका क्षेत्रमा चन्दननाथ नगरपालिका कर्णालीमै अगाडी छ ।
महिला शसक्तिकरणका कुरा गर्दा के गर्नु भयो त ? यसै त कर्णालीका महिला अशिक्षित छन् । सम्झाउनै बुझाउनै ग्राहो छ । तर म एक महिला भएको हिसाबले पनि महिला मैत्री कानुन निर्माण,महिला हिंसा न्युनिकरणका सबालमा विशेष जोड दिएको छु । सशक्त रूपमा, सक्रिय रूपमा नेतृत्व लिन नसक्ने अवस्था अझै छ ।
तर चेतना विकासका लागि अग्रसर भएका अगाडी बढिरहेकी छु । कार्यबोझका कुरा छन्, अबसरमा समानता, रुढिवादी परम्परा, बालविवाह, बहुविवाहहरू न्युनिकरणमा नगरपालिका लागि परेको छ ।
तपाईको अगुवाईमा हुन लागेको लगानी सम्मेलन स्थगीत किन भयो ? अब हुन्छ कहिले हुन्छ ?
जुम्लाको विकासका लागि बाह्य लगानी पनि उत्तिकै आबश्यकता छ । लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य भनेकै जुम्लालाई कसरी विकासमा उन्मुख गराउने र त्यहाँका मानिसको जीवनस्तरलाई कसरी आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हो । त्योसँगै जुम्लाको जीवनशैलीलाई कसरी माथि उकास्ने भन्ने नै लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो ।
तर त्यहा राजनीतिक कारणले लगानी सम्मेलको उद्देशय नबुझेर केहि व्यक्तिका कारण स्थगन हुन पुग्यो । तर मेरो कार्यकालभित्र लगानी सम्मेलन हुन्छ । तर त्यसका लागि धेरै कसरत गर्नुपर्ने अबस्था छ । यहाँका हरेक सम्भावनाहरुमा लगानीको अबसर जुटाएर आर्थिक समृद्धी हासिल गर्न लगानी सम्मेलन गर्छौ ।
अब अन्त्यमा केहि भन्नु छ ?
अन्त्यमा मत जनता नआत्तिन अनुरोध गर्दछु । जनताको विकासका लागि काम गर्न आएको हु । केहि नीतिगत हिसाबले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिएको छैन् । तर पाँच वर्ष भित्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विजुली, संचार, खानेपानी, रोजगार सबैको ग्यारेण्टी हुने छ । भने जल जमिन, जडिबुटि र वनको पनि हामी सदुपयोगमा जुट्ने छौ । पाँच वर्षमा सबैका अपेक्षा पुरा हुने गरी काम गर्ने छौ ।